Maxay Ahaayeen SAGAALKII Kalmadood Ee Thomas Partey Uu Ku
Thomas Partey ayaa maanta si buuxda loogu soo bandhigay garoonka Arsenal oo uu tababarkiisii ugu horreeyey la bilaabayo kaddib markii uu kusoo biiray kooxda maalintii ugu dambaysay suuqa iibka ciyaartoyda.
Xiddigan khadka dhexe ee reer Ghana oo ka mid ahaa shan ciyaartoy oo xagaagan yimid garoonka Emirates Stadium oo Arsenal kusoo biiray, ayaa noqday xubintii ugu dambaysay ee Mikel Arteta uu saxeexiisa kusoo gunaanado suuqa dhowaanta xidhmay.
Laacibkan ayaa markii uu heshiiska u saxeexay Arsenal, waxa uu u baxay ciyaaraha qarankiisa oo uu ka qayb-gelayay, taas oo keentay inay dib u dhacdo soo bandhiggidiisu.
Jimcihii oo waddankiisu uu 3-0 ku garaacay Mali, ayuu Thomas Partey ciyaaray 90kii daqiiqadoodba waxaana ugu xigtay kulankii waddankiisu uu xulka qaranka Ghana 5-1 ku xasuuqay Qatar oo uu laba ka mid ah goolasha uu caawiye ka ahaa Thomas Partey.
Laacibkan ayaa maanta ay Arsenal usoo bandhigtay warbaahinta isagoo xidhan shaadhka kooxdeeda, waxaana sawirradiisa lagu daabacay baraha bulshada ee kooxda iyadoo laga duubay muuqaallo kooban ka hor intii aanu tababarkiisa ugu horreeya la qaadan kooxdiisa cusub.
Thomas Partey ayaa isku diyaarin doona kulanka Manchester City iyo Arsenal ee Sabtida, taas oo uu filayo inuu qayb weyn ka noqon doono, inkasta oo Mikel Arteta uu go’aan ka gaadhi doono haddii uu kusoo bilaabayo saxeex maalmo kooban tababarka la qaadanayay, laakiin xaqiiqada ayaa ah inuu leeyahay tayadii ciyaareed ee uu ku xammili lahaa culays kasta inkasta oo uu horyaalka Premier League ku cusub yahay.
Markii uu soo dhamaaday bandhiggiisu ayuu Thomas Partey qabsaday baraha bulshada iyadoo ereyo kooban oo tiradoodu sagaal ahayna ay in badan la dhaceen jamaahiirta kooxdu.
Sawirro uu bartiisa Twitterka ku baahiyey mar dhoweyd ayuu Thomas Partey ku muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay inuu ka mid noqdo Arsenal oo uu shaadhkeeda xidho, waxaana uu ku qeexay sagaal kalmadood.
Thomas Partey ayaa isaga oo kor u haya garanka Arsenal, waxa uu qoraalkiisa ku yidhi: “Wow”, taas oo uu ku muujinayay sida uu ula dhacsan yahay shaadhkiisa cusub, waxaanu intaa ku daray: “Aad ayuu u fiican yahay, aad ayuu u wanaagsan yahay.”
Sagaalka kalmadood oo dhamaantood muujinaya farxaddiisa ayaa uu sidoo kale ku yidhi: “Aad ayuu u wanaagsan yahay.”
Wakiilada Bruno Fernandes OO Ka Hadlay Dagaalka La Sheegay
lawsuit in opposition to mining firm for “slavery” in Eritrea won’t happen